Xashiishadu waxay kaa caawin kartaa dhimista daalka • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Cannabis ayaa kaa caawin karta dhimista daalka
albaabka daroogada 10 May 2022
maqaal by daroogada 10 May 2022
Daraasad cusub oo Maraykan ah ayaa soo jeedinaysa in isticmaalka xashiishadda ay gacan ka geysan karto dhimista daalka, inkastoo qorayaashu ay caddeeyeen in saameynta ugu dambeysa ay ku xiran tahay macaamilka shakhsi ahaaneed.
1 Ka qaybgalayaashu waxay isticmaaleen xashiishadda cannabis ganacsi ahaan laga heli karo Maraykanka.
2 Inta badan waxay la kulmeen horumar guud oo daalka ah
3 Tamartu waxay ku guulaysataa fadhiga fadhiga
Iyada oo ku saleysan xaaladda dheef-shiid kiimikaad ee macaamilka iyo sifooyinka gaarka ah ee alaabta marijuana ee la isticmaalo, baaxadda saameynta iyo baaxadda dhibaatooyinka soo raaca ee la kulmay way kala duwanaan kartaa. Tani waa waxa qorayaashu ay ku qoraan maqaalka lagu daabacay joornaalka dib-u-eegis ee asxaabta Xashiishad caafimaad iyo xashiishad.
Ka qaybgalayaashu waxay isticmaaleen xashiishadda cannabis ganacsi ahaan laga heli karo Maraykanka.
In kasta oo korodhka gelitaanka iyo isticmaalka xashiishadda ee Maraykanka, gaar ahaan dadka waaweyn iyo bukaannada qaba xaalado caafimaad oo halis ah, qorayaashu waxay qoraan: "Bixiyeyaasha caafimaadka iyo macaamiishu weli waxay haystaan ​​tilmaamo yar oo rasmi ah oo ka yimaada bulshada sayniska iyo caafimaadka ee ku saabsan sida loo isticmaalo alaabta xashiishadda ku salaysan ee ay doortaan. Isticmaalkeeda waxay saameyn kartaa dareenka daalka iyo heerarka tamarta."
Cilmi baadhayaashu waxay rabeen inay fikrad wanaagsan ka helaan saamaynta ay alaabooyinka xashiishadda ganacsi ahaan loo heli karo ku yeelan karaan daalka. Si loo ogaado, laga bilaabo Juun 6, 2016 ilaa Ogosto 7, 2019, waxay eegeen 3.922 kalfadhi xashiishad iskood u maamulan oo ay sameeyeen 1.224 qofood oo isticmaalaya Appka sii daa loo isticmaalo.
Appkan, isticmaalayaashu way awoodaan "si qarsoodi ah ula soco waayaha dhabta ah iyo khibradaha taariikhiga ah ee xashiishadda iyo alaabada CBD", oo ay ku jiraan halka badeecada laga soo iibiyay, sababta loo isticmaalay, iyo inta la isticmaalay, iyo sidoo kale la kulma nafis calaamadaha, dareenka, iyo waxyeelooyinka.
Cilmi-baadhayaashu waxay tixgeliyeen isbeddellada shakhsi ahaaneed ee xoogga daalka ka hor iyo ka dib isticmaalka xashiishadda.
Inta badan waxay la kulmeen horumar guud oo daalka ah
Natiijadu waxay u muuqdeen kuwo joogto ah oo riwaayado leh. " Celcelis ahaan, 91,94 boqolkiiba dadku waxay la kulmeen daal yar ka dib isticmaalka", qoraallada daraasadda. Marka la eego miisaanka eber ilaa 10, celceliska dhimista xoojinta calaamadaha, sida ay ku qiimeeyeen ka qaybgalayaasha daraasadda, waxay ahayd qiyaastii 3,5 dhibcood.
Si gaar ah, ma jirin farqi weyn oo u dhexeeya calaamadaha gargaarka kuwa isticmaalaya ubaxa indica ama sativa, shakhsiyaadka sigaarka cabba haramaha ayaa sheegay in calaamaduhu ay ka fiicnaadeen kuwa isticmaalaya tuubooyinka ama uumiga (vaporizers) aan la xiriirin isbeddellada xoojinta calaamadaha.
Laakiin ma wada ahayn war wanaagsan. Cilmi-baadhayaashu waxay soo wariyeen in in ka yar 24 boqolkiiba isticmaalayaasha ay soo sheegeen dareenka daalka oo kordhay mar uun, sida dareen la'aan iyo in lagu xiro sariirta.
Tamartu waxay ku guulaysataa fadhiga fadhiga
Si kastaba ha ahaatee, boqolkiiba in ay ka hooseeyaan ilaa 37 boqolkiiba ka qaybgalayaasha daraasadda kuwaas oo sheegay in ay la kulmeen tamar badan, taas oo ah, dareemaya firfircooni, tamar, jilicsan ama wax soo saar leh.
Sahan lagu sameeyay ku dhawaad ​​90.000 oo dhalinyaro ah oo la sii daayay 2020 ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba todoba kaliya ee dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 ee isticmaalay xashiishadda waagii hore ay sameeyaan 60 daqiiqo dhaqdhaqaaq jireed maalin kasta, boqolkiiba in xitaa ay ka hooseeyaan dadka isticmaala xashiishadda.
Isticmaalka xashiishadda, cilmi-baaristu waxay muujineysaa inaadan daruuri ahayn inaad la ildaran tahay daal (afb.)
Laakiin daraasad Maraykan ah oo la daabacay 2021 oo lagu baarayay xiriirka ka dhexeeya isticmaalka xashiishadda iyo jimicsiga sida jimicsi waxaa lagu qiimeeyay da'da yar iyo da'da dhexe, iyadoo la go'aamiyay in uu jiri karo xiriir togan oo ka dhexeeya labadooda. "Isticmaalka marijuana si weyn uma xiriirna jimicsiga, liddi ku ah xikmadda caadiga ah ee isticmaalayaasha marijuana ay u badan tahay inay firfircoonaadaan", cilmi-baarayaashu waxay qoreen.
Natiijooyin dhowr ah oo la xiriira isticmaalka xashiishadda iyo dhaqdhaqaaqa jirka ayaa laga yaabaa inay siiyeen Jaamacadda Colorado Boulder dhiirigelinta inay ku dhawaaqdo dhammaadka 2021 inay qorto dadka isku dara xashiishadda iyo jimicsiga daraasad soo socota.
Dhammaan isticmaalayaasha diiwaangashan dhibaatooyinka soo raaca, sahankii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in 68 boqolkiiba ay soo sheegaan ugu yaraan hal saameyn oo xun (sida af qalalan ama dareen lallabbo), 96 boqolkiiba waxay soo sheegaan ugu yaraan hal saameyn togan (sida nasasho ama nabdoon. Dareenka), iyo 81 boqolkiiba ayaa sheegay ugu yaraan hal saameyn oo xaaladda-gaar ah (sida dareenka sare ama xiirid).
Waxay soo gabagabeeyeen in cilmi-baarista mustaqbalka ay ka faa'iideysan doonto baaritaanka saameynta dhabta ah ee isticmaalka xashiishadda ee daalka dabeecadda iyo maskaxda ee hoos yimaada xaaladaha jireed ee isbeddelka ee dadka caafimaadka qaba iyo dadka caafimaadka.
Ilaha ao EdmontonJournal (EN), HighTimes (EN), TheGrowthOp (EN)
Burooyinka bukaanka kansarka ayaa yaraaday qeybtii ka dib markii la isticmaalay saliid CBD
Tijaabadii ugu horeysay ee caafimaad ee xashiishadda sida...